University of Waterloo - Waxbarashada Kanada. Study Abroad
aasaasay : 1956
Ardayda (qiyaastii.) : 31000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Waterloo
Qor at University of Waterloo
In wadnaha ee Gobolka Waterloo, safka hore ee hal-abuurnimo, Jaamacadda Waterloo hoy u tahay cilmi dunida-beddelo iyo cilmiga loo waxyooday. At xarun u ah shabakad sii kordhaysa ee iskaashiga caalamiga ah, Waterloo qaabeeyaan mustaqbalka by dhisidda buundooyinka la warshadaha iyo nidaamo, hay'adaha iyo bulshooyinka.
From Kombuyuutarada galmada iyo nanotechnology in cilmi nafsiga caafimaad, injineernimada iyo cilmiga caafimaadka cilmi, fikradaha in beddeli doonaa dunida oo dhan waa in ay xuddun u ah kuwa aan nahay.
In nus qarni oo kaliya a, Jaamacadda Waterloo, yaalaa wadnaha ee xarunta technology Kanada ee, waxa uu noqday jaamacad keentay dhamaystiran iyada oo ku dhowaad 36,000 buuxa- iyo ardayda waqti-dhiman barnaamijyada undergraduate iyo graduate.
Si joogta ah kaalinta jaamacadaha ugu cusub ee Kanada, Waterloo hoy u tahay cilmi baaris sare iyo cilmiga sayniska iyo injineernimada, xisaabta iyo sayniska kombiyuutarka, caafimaadka, deegaanka, fanka iyo cilmiga bulshada. From Kombuyuutarada galmada iyo nanotechnology si caafimaad cilmi nafsiga iyo cilmiga caafimaadka cilmi, Waterloo isu keentaa fikrado iyo maskaxda cajiib ah, tabo cusub dhiirigalin leh saameyn dhab ah maanta iyo mustaqbalka.
Sida guriga barnaamijka waxbarashada post-sare co-operative ugu weyn dunida ee, Waterloo duuban tahay xiriir ay dunida iyo dhiiri iskaashiga ganacsiga ee waxbarasho, cilmi, iyo ganacsiyaynya. Iyadoo dhismaha iyo xarumaha waxbarashada on afar qaaradood, iyo iskaashiga waxbarasho ee ka bilaabanaya caalamka, Waterloo waxaa qaabaynta mustaqbalka ee caalamka.
Jaamacada ugu cusub by tirada Kanada ee
1957: University of Waterloo la furmay 74 ardayda
maanta: 30,600 undergraduate, 5,300 ardayda ka qalin
15 boqolkiiba undergraduate caalamiga ah, 36 per ardayda qalin boqolkiiba caalamiga ah
1,139 waqti-buuxa ah awood, 322 awood caalami ah
Shahaadooyinka siiyo: 5,778 bachelor degrees, 1,723 Masters,303 PhD (2014)
Our saamaynta caalamka
1,000-acre campus weyn ee Waterloo
xarumood Satellite noolaynta diirkja magaalada guud ahaan gobolka ee Kitchener, Cambridge iyo Stratford
$2.6 billion sanadkii saamaynta dhaqaale ee Ontario (2013 Dhaqaalaha Impact Report)
Sciences Health Applied
10 dugsiyada awood ku salaysan
Accounting iyo Maaliyadda (Arts)
Balsillie School Arrimaha Caalamiga ah (Arts)
David Cheriton School of Science Computer (xisaabta)
School of Systems Caafimaadka Dadweynaha iyo Caafimaadka (Sciences Health Applied)
School of Deegaanka, Enterprise iyo Horumarinta (Deegaanka)
School of Deegaanka, Resources oo Sustainability (Deegaanka)
Work Social (Renison)
4 hay'adaha xiriirta oo federaali ah
St. University Jerome ee
St. Paul ee University College
heer sare Caalamka aqoonsan yahay
QS Stars 5+ darajeeyo
Top Comprehensive University Research ee Kanada siddeed sano oo isku xigta (Research Infosource)
top 25 adduunka waayo, Sayniska Kombiyuutarka iyo Xisaabta (QS qiimeynta)
top 50 adduunka waayo, Juqraafiga (QS qiimeynta)
top 100 adduunka for Civil Engineering, Engineering korontada, Engineering farsamo, Sciences Environmental, Sociology, Naqshadaha Dhismaha iyo Deegaanka dhisay, Psychology, iyo Cilmi-baarista tirokoobka iyo Hawlgalada (QS qiimeynta)
Mid ka mid ah kooxda aduunka ugu fiican 50 dugsiyada injineernimada (Ciidmada Academic of Jaamacadaha Adduunka)
#19 waayo, Sayniska Kombiyuutarka (xoreeyo. News Report iyo World)
#47 waayo, Engineering (xoreeyo. News Report iyo World)
Ardayda si gaar ah u qalabaysan guusha
ardayda Waterloo bilaabi xoog leh oo lagu luuqeeyo jawi waxbarasho oo waa khibrad ah, cilmi-hodan iyo real-aduunka la xiriira.
$250+ million dakhliga sheegay by ardayda co-op Waterloo (2014-15)
Laba sano ka dib ka qalin, 89 boqolkiiba ardayda Waterloo co-op ka shaqeeya beer la xiriira ay degreemarka la barbar dhigo 75 boqolkiiba dhammaan goon jaamacadaha Ontario
#1 diyaarinta mustaqbalkiisa (Globe oo Report University Mail)
54 boqolkiiba ardayda leedahay celceliska galo of 90+ boqolkiiba (2015)
17,600+ shuruudaha shaqada ee 60+ dalalka la 6,300+ ururada
Qaar ka mid ah shirkadaha ugu sareeya kan kiraystaan ​​ardayda waxaa ka mid ah:
Hospital ee Carruurta Xanuunsanaysa
Toyota Motor Warshadaha Kanada Inc.
Applied Studies Language
Balsillie School Arrimaha Caalamiga ah
Engineering Civil iyo Environmenal
Studies Qadiimiga ah
Combinatorics iyo Dhiciyaan
Drama iyo Isgaarsiinta Hadalka
Machadka Luqadda Ingiriisiga (Renison Ceelii)
Deegaanka, Enterprise iyo Horumarinta
Deegaanka, Resources oo Sustainability
Juqraafiga iyo Maareynta Bey'adda
Germanic iyo Slavic Studies
Engineering Farsamada iyo Mechatronics
Indhaha iyo Vision Science
Studies Nabadda iyo Khilaafaadka
Caafimaadka Dadweynaha iyo Systems Caafimaadka
Madadaalada iyo Studies firaaqada
Sayniska iyo Aviation
Science iyo Business
Kacsiga, Guurka iyo Qoyska
Studies Horumarinta Bulshada
Sociology iyo Legal Studies
Studies Isbaanish iyo Latin American
In 1957, abuurnimo iyo ganacsiga keenay University of Waterloo galay isagoo, sida koox ka mid ah hoggaamiyayaasha ganacsiga kuwaad jaamacad cusub oo la dhisay si wax looga qabto qaar ka mid ah caqabadaha ugu niyad jebinaysaa ee dunida.
Waxay ahayd da'da Dagaalkii Qaboobaa iyo tartanka bannaan ee, marka hal computer ah qol buuxiyey. Daahfurtay in sayniska, daawo iyo injineernimada soo socota si degdeg ah oo caraysan. Madaxda Warshadaha ee Kitchener-Waterloo garan hore u socda loogu tala galay in ka badan dadka kaliya tababarka ee technology ee maalinta.
“wax soo saarka ugu weyn oo aannu Ogaan ka our Zaman electronic waa tartanka ka wanaagsan aqoon,"Ayuu yiri Ira Cirbadaha, Madaxweynaha B.F. Goodrich Canada, in a 1956 hadal in caawiyay aasaaska u University of Waterloo jiifay. "Tani waxay khusaysaa beeraha oo dhan -. Ma ahan oo keliya berrinkii sayniska"
Wada jir ah ula J. Gerald Hagey, Madaxweynaha Waterloo ee aasaasay, iyo Rev. Korneeliyos Siegfried, kuwaas oo keenay St. Xiriirka galay Jerome ayaa la Waterloo, Cirbadaha caawiyay aasaas u nooc cusub oo waxbarasho ujeeddo-driven jiifay.
Waterloo la dhisay in dadka baraan inuu ka fikiro habab cusub. Taasi macnaheedu gaarey baxay guud ahaan nidaamo iyo Caqlina, qaybsiga khayraadka, oo dhalisay jiho cusub oo cilmi. Waxaa la micno gacanta-in-gacanta la warshadaha ka shaqeeya, dadka daynin leedahay ay hantida aqooneed iyo guusha in ka ganacsiyaynya yimid.
Dhisay on aasaaska ka sayniska, injineernimada iyo xisaabta, Waterloo ayaa sidoo kale noqday hogaamiyaha waxbarashada deegaanka, naqshadaha, farshaxanka, cilmi nafsiga iyo caafimaadka aadanaha.
dhismaha injineernimada kiimikada A ahaa kii ugu horeeyay ee ku kici 1958, raacay by physics iyo xisaabta dhismaha sannad ka dib. dhismaha farshaxanka horeysay Waterloo ee ka furmay 1962, isla sanadkaas jaamacadda dhallinyarada ka qalin jabiyey fasalkii ugu horeysay ee injineerada. In 1967, Waterloo guriga dugsiga kaliya ee indhaha ee dalka af-Ingiriisi noqday.
In horraantii 1960kii, professor xisaabta Wes Graham sameeyey Waterloo ka mid ah jaamacadaha ugu horeysay ee adduunka in la siiyo undergraduate helaan gobolka-of-the-art kombiyuutarada in waqtiga buuxsamay qol. ruuxii Taasi khatarta-qaadashada iyo hal-abuurnimo dab qabsaday ardayda iyo cilmi isku mid, caawiyo qeexidda aqoonsiga hadhid caalamka gobolka ee sida quwad technology a.
Ka dib hawlgabka Hagey ee 1969, Madaxweynaha Burt Matthews sii waday in ay qaado Waterloo jiho cusub, isagoo intaa ku daray in waaxda koowaad ee kinesiology dunida ee, iyo barnaamijyo ay ka mid yihiin meelaha baxaya cilmiga dhulka, nafsiga caafimaad iyo xisaabaadka.
Dhisidda a dunida Sarrifle
dhisaa Waterloo: J. Gerald Hagey (ka tagay), iyo Ciiraa oo G. cirbadaha(xarunta) iyo Reverend Korneeliyos Siegfried (xaq u).
xal cusub, waxbarashada cusub
Chemistry iyo injineernimada dhismaha kiimikada, (hadda loo yaqaan Douglas Wright Engineering) hoos dhismaha 1958.
Fikradaha ku soo bilowdo kulankaan
Danwadaag la leh dowladda, oo lala yeesho qaybaha gaarka loo leeyahay, la Qalinjabiyeyaasha iyo hay'adaha adduunka oo dhan tusaale u saamayn iyo saamaynta Waterloo ee.
Muddo sanado ah, malaayiin doolar cilmi ka yimid dawladaha, ka hayadaha iyo warshadaha si ay u taageeraan laboratories iyo mufakiriinta. Shirkadaha Spinoff aasaasay by qalin ama Professor madow danbeeyay caawiyay eryi software a- iyo kacaanka hardware-u-dhiska, jeestay goobtan waxa badan oo hadda dub "dooxada Silicon ee Waqooyiga." erayadani "iibsiga technology" ayaa noqday caadiga ah Waterloo a.
Iyadoo heer sare ah loo aqoonsan yahay in co-operative waxbarashada, Waterloo ugu dambaysta la fahamsan yahay muhiimadda ay leedahay isku xirta warshadaha iyo fikradaha. Ardayda nooga shirkadaha iyaga shaqo leh waji cusub iyo cilmi-baarista ku laayeen keentay. Waxay helaan waayo-aragnimo shaqo ee dunida dhabta qiimo leh, iyo mushaar ka dhigaya waxbarashada dheeraad ah oo la heli karo.
doode A awood for hawl noocaasoo kale ahaa Doug Wright, kuwaas oo noqday Madaxweynihii saddexaad ee jaamacadda. Wright safray fog oo ballaaran u sheegto dawladaha, shaqaalaha madaxda shirkadaha iyo soo saarka caalamiga ah in waxa adduunka looga baahan yahay in ka badan heer sare ah waxaa lagu tababaray, iyo in sida kuwa badan oo iyaga ka mid ah intii suurtogal ah waa in ka Waterloo iman.
James Downey soo noqday madaxweynaha dalkaasi 1993-99, oo waxaa raacay by David Johnston, dheer oo arkay multi-million dollar ee Ololaha Waterloo oo xoogga cusub mashaariicda waaweyn ee ku lug leh "iskaashi" la warshadaha, Dawladaha iyo Qalinjabiyeyaasha. The muddo dheer la filayay cilmi-baarista iyo technology park on campus woqooyi ka furay, oo loo magacaabay in sharaf Johnston ayaa dhalay ka dib wuxuu Kanada ee 28thGuddoomiyaha Guud. taageerada gaarka ah iyo bulshada rayidka ah lagu bixiyo campus ah ee dugsiga naqshadda dhismaha ee Cambridge, 30 kiiloomitir u jirta goobta ugu weyn ee Waterloo.
Sida 2009 bilaabay, a cilmiga caafimaadka campus - guriga dugsiga cusub ee farmashiyaha - furay magaalada Kitchener. campus injineernimada An furay Imaaraadka Carabta isla sanadkaas, iyo campus a digital furay Stratford, waxay leeyihiin. in 2010. In Qorshaha Toban Sixth sanado ah 2007-17, qorshaha jaamacadda Caddaynay for ballaarinta dheeraad ah Kanada ka baxsan.
Tan iyo markii ay ka imanayaan Madaxweyne Feridun Hamdullahpur, saamaynta Waterloo ee caalamiga ah ay ka bexeen, iyada oo loo marayo heshiis la kaashanaya hay'adaha ku Nanjing iyo Suzhou Shiinaha, Brazil, Germany, iyo Saudi Arabia.
Iyada oo saameyn ku dareemay dunida dacaladeeda, Waterloo waxaa si joogto ah ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya ee Kanada iyo adduunka oo kaalinta. ka iyo bilowgii aad u degani si ay uga jawaabaan caqabadaha iyo in la abuuro xal, tani waa jaamacad ka go'an inuu u dhaqaaqo weeraryahanka dunida, hal-abuurnimo waqti.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Waterloo ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Waterloo rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Waterloo
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Waterloo.